पाख्रीनको एकाङ्की सङ्ग्रह ‘अनुगमन’ को विमोचन – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
पाख्रीनको एकाङ्की सङ्ग्रह ‘अनुगमन’ को विमोचन
काठमाडौँ, १४ वैशाख, २०७६ । मनोहरा साहित्य समाजको ४३औं रचना वाचन तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पुरानो सिनामंगल, टाउन प्लानिङस्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूलको हलमा वैशाख १४ गते शनिबार सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
सो कार्यक्रममा साहित्यकार समीर पाख्रीनको एकाङ्की सङ्ग्रह “अनुगमन” को विमोचन गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी विजय सागर, अतिथि वेदमणि घिमिरे, गोपाल अश्क, पवन आलोक र कार्यक्रमका सभापति डिल्लीराज अर्यालले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा डा. चिरञ्जीवी रेग्मी, कर्मसिंह घर्ती मगर, नवराज रिजाल पनि रहनु भएको कार्यक्रममा विमोचित पुस्तकमाथि समीक्षक भावकेशर बराल र गोपाल अश्कले खुलेर समीक्षा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विजय सागर, अतिथि पवन आलोक र वेदमणि घिमिरेले कार्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्नुको साथै कविता पनि सुनाएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित साहित्यकार सम्पत काफ्ले, कृष्ण गौतम, रामकुमार पण्डित, दीनानाथ पोखरेल, कर्मसिंह घर्ती मगर, सीता आस्था ढुङ्गेल, पूनम घिमिरे, अनुराग अनु, आस्मा अर्याल, रामप्रसाद घिमिरे, खेमलाल पोखरेल, विजय विश्वास, भुवन शिवाकोटी, डा।शेषराज आचार्य, सुमन पुडासैनी, कोमल प्रसाद पोखरेल, घनश्याम प्रसाई, खोलाघरे साहिंलो, जसध्वज गुरुङ, पुरुषोत्तम सिग्देल र डा. खगेन्द्र शर्माले आ–आफ्नो रचना सुनाएका थिए ।
सो रचना वाचन तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम साहित्यकार शीतल गिरीले सञ्चालन गरेका थिए ।
Tagged एकांकी सङ्ग्रह मनोहरा साहित्य समाज
कक्षा ९ को नेपाली विषय पाठ्यपुस्तकमा पाविकेको गम्भीर त्रुटी
Tags: एकांकी सङ्ग्रह, मनोहरा साहित्य समाज